Akwụkwọ Ozi Nke Abụọ E Degaara Ndị Kọrịnt 9:1-15
Ihe Pọl gwara ndị Kọrịnt iji mee ka ha nye onyinye (1-15)
Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya (7)
9 Ọ baghị uru idetara unu akwụkwọ ka unu mara na unu kwesịrị inyere ndị nsọ aka,*+ 2 n’ihi na ama m na unu chọrọ inye aka. Eji m unu na-anyara ndị Masedonia isi. Agwara m ha na o ruola otu afọ unu ndị nọ n’Akeya* jikeere inye aka. N’ihi otú o si na-agụsi unu agụụ ike inye aka, ọtụtụ ndị Masedonia chọkwara inye aka. 3 Ma m na-ezitere unu ụmụnna ndị ahụ, ka isi anyị ji unu na-anya na unu ejikerela inye aka ghara ịbụ n’efu, kama ka ọ bụrụ n’eziokwu na unu ejikerela inye aka otú m gwara ha. 4 Ma ọ́ bụghị ya, ọ bụrụ na ndị Masedonia esoro m bịa ma hụ na unu ejikerebeghị, ihere ga-eme anyị n’ihi obi anyị tụkwasịrị unu, ihere ga-emekwa ununwa. 5 N’ihi ya, echere m na m kwesịrị ịgwa ụmụnna ndị ahụ ka ha buru m ụzọ bịa hụ unu, ka ọ ga-abụ, tupu mụnwa abịa, ya abụrụ na ha anakọtachaala onyinye unu kwere nkwa inye. E si otú a mee ya, ọ ga-egosi na a manyeghị unu amanye inye ihe unu nyere, kama na ihe unu nyere si unu n’obi. 6 Ma n’ihe gbasara okwu a, onye na-agha mkpụrụ ole na ole ga-aghọrọkwa mkpụrụ ole na ole. Ma, onye na-agha ọtụtụ mkpụrụ ga-aghọrọ ọtụtụ mkpụrụ.+ 7 Ka onye ọ bụla nye ihe o kpebiri n’obi ya, ọ bụghị ihe na-esighị ya n’obi, ọ bụghịkwa dị ka à manyere ya amanye,+ n’ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.+ 8 Chineke ga-emeli ka amara ya baara unu ụba, ka unu wee nwee ihe zuuru unu mgbe niile n’ihe niile, nweekwa ọtụtụ ihe unu ga-eji na-arụ ọrụ niile dị mma.+ 9 (Otú ahụ ka e dere ya, sị: “O kesaarala mmadụ niile ihe. O nyela ndị ogbenye ihe. Ọ ga na-eme ezi omume ruo mgbe ebighị ebi.”+ 10 Chineke, onye na-enye onye na-agha mkpụrụ ọtụtụ mkpụrụ, nke na-enyekwa ọtụtụ achịcha ka ndị mmadụ taa, ga-enye unu mkpụrụ unu ga-agha, meekwa ka ọ dị ọtụtụ. Ọ ga-emekwa ka unu nweta ọtụtụ ihe ọma n’ezi omume unu na-eme.) 11 N’ihe niile, Chineke emeela ka unu baa ọgaranya ka unu wee na-emesapụ nnọọ aka. Ndị mmadụ ga-ekelekwa Chineke n’ihi onyinye unu nyere nke anyị ga-enye ndị ọzọ. 12 Otú a unu si enyere ndị ọzọ aka na-abara ndị nsọ nọ ná mkpa uru,+ na-emekwa ka ọtụtụ ndị na-ekele Chineke. 13 Onyinye a unu na-enye na-egosi ụdị mmadụ unu bụ, ndị mmadụ ga na-etokwa Chineke n’ihi na unu na-eme ihe unu na-ezisa banyere Kraịst, unu jikwa obi unu niile na-enye, ma ụmụnna ndị ahụ ma mmadụ niile, onyinye.+ 14 Ha ga-arịọ Chineke ka ọ nọnyere unu. Ha ga-ahụkwa unu n’anya n’ihi amara na-enweghị atụ Chineke na-emere unu. 15 Anyị na-ekele Chineke maka onyinye a na-agaghị akọwali akọwa ọ na-enye anyị.
^ Ma ọ bụ “ijere ndị nsọ ozi.”
^ Akeya bụ obodo ndị Rom na-achị. Isi obodo ya bụ Kọrịnt.